NVIDIA Shield TV dị na Spain ugbu a na Google Assistant | Gam akporosis
Ihe omuma ohuru ohuru nke SHIELD na Google Assistant abia taa na Spain
Google Assistant etinyela onwe ya dị ka a nke nkwa di uku banyere odi n’ihu nke ahụ ga-erute anyị nso ma jupụta n'ime ya nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ sayensị ụwa. Wouldnye gaara agwa anyị afọ iri abụọ gara aga na anyị ga-ejegharị na ekwentị, eziokwu dị adị, ndị enyemaka na-enyere aka maka mkparịta ụka igwe mmadụ na ụwa dijitalụ nke ghọgoro agbata obi maka ọtụtụ.
Taa bụ ụbọchị ọzọ mgbe ngwaọrụ nwere Google Assistant kwalite asụsụ ọma na enyemaka, Ọhụrụ NVIDIA Shield. N'etiti ihe ndị dị ịrịba ama nwere ike ịkọwapụta ihe dị ntakịrị na onye nchịkwa nke nwere ụdị dị iche, ọ bụ ezie na n'ime ya nwere otu ihe ahụ ya na mbụ.
Ọ bụ ezie na ihe na-eme ka NVIDIA Shield dị iche iche bụ sọftụwia ya site n'inwe Nougat na maka ịbụ “igbe” izizi iji nye ọrụ Google Assistant. Nke a pụtara na enwere ike iji olu ahụ nweta nsonaazụ ọchụchọ maka ọdịnaya ọdịnaya, kamakwa maka ụdị omume ndị ọzọ na-emekarị na Google. Ọ abụọ na ngwa NVIDIA Abù ngwa, na ya nwere ike ịbụ gị ọzọ "smart" ehiwe maka ebe obibi gị.
Taa ị nwere ike ịzụta NVIDIA Shield ugbu a:
NVIDIA Shield nkiti: 229,99 euro
NVIDIA Shield TV Pro: € 329,99
Onye nchịkwa ọhụrụ; € 69,99
Ma oburu na inwere otu n’ime ndi nwere TV SHIELD gara aga, mmelite ga-eweta akụkọ niile dị na ngwanrọ ahụ, ọ bụ ezie na ịchọrọ ịzụta ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ ma ọ bụ NVIDIA Spot iji nweta ahụmịhe ọhụụ.
Zọ ọzọ iji kwadebe onwe gị n'ụlọ yana onye enyemaka Google iji nwee eke nwoke-igwe mkparịta ụka Na ụdị nke Her ma ọ bụ na kọmputa dị na 2001, A Space Odyssey nke Stanley Kubrick dere. Ugbu a, anyị nwere ike inwe olile anya na otu ụbọchị anyị ga-adị n'aka anyị gaa n'Homelọ Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe omuma ohuru ohuru nke SHIELD na Google Assistant abia taa na Spain
Ma onye enyemaka Google ọ ga-abụ na Spanish? N'ihi na ọ pụtabeghị.
Kọmputa bụ HAL. Ha bu akwukwo ozi n’iru ndi IBM.
Zaghachi na MANUEL
Nest ngwaahịa gbasaa na Italytali, Germany, Austria na Spain
[APK] Anyị na-egosi gị otu esi etinye Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile